विवाह अघि शा’रीरिक स’म्बन्ध राखेको था’हा हुन्छ कि हुँदैन ? पूरै हेर्नुहोस्…… – live 60media
विवाह अघि शा’रीरिक स’म्बन्ध राखेको था’हा हुन्छ कि हुँदैन ? पूरै हेर्नुहोस्……
नेपालमा धेरैजसोले विवाहपछि मात्र शा’रीरिक स’म्बन्ध स्थापित गर्दछन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट प्रस्ट भएको छ। तथापि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा उच्च शिक्षासँगै विवाहपूर्व शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्नेको संख्या बढेको छ । त्यसैले पहिलो शा’रीरिक स’म्बन्ध र सुहा’गरातको शा’रीरिक स’म्बन्ध अलिकति फरक छ । किशोरावस्थामा पुगेसँगै विशेषतः वि’परीत लिं’गीसँग शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्ने चाहना हुन्छ।
तर, वैवाहिक स्थितिमा जसरी सामाजिक तथा का’नुनी तवरमा शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्न छुट छ, अन्य बेला यस्तो किसिमको स्वतन्त्रता हुँदैन।विवाहपूर्व शा’रीरिक स’म्बन्ध राखेपछि तुलनात्मक रूपमा पुरुष साथीले धो’का दिने गरेको हुनाले विशेषतः प्रेमिल सम्बन्धमा रहेका जोडीले सम्प’र्कलाई विवाहपछिको लागि साँचेर राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । तर, पनि विशेष परिस्थितिवश वा दुवैको सहमतिमा शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्न नसकिने भने होइन।मानिस नयाँ अनुभव सँगाल्न चाहन्छ।
यस क्रममा पहिलो पटकको शा’रीरिक स’म्बन्ध आफ्नो प्रेमिका, चिने जानेका वा व्यावसायिक यौ’नक’र्मीसँग हुनसक्छ । उचित यौ’न शिक्षा एवं प्रज’नन अं’गको विस्तृत जानकारीको अभावमा पहिलो पटकको शा’रीरिक स’म्बन्ध धेरैजसोका लागि त्यति सफल र सुखदायी हुँदैन।
← प’क्राउ परेका एक जो’डीले पुलिस’को गा’डिमै यस्तो ह’र्कत ग’रेपछी ( भिडियो भाइरल )
एका बिहानै अकला देवी को दर्शन गरि आज २०७७ असोज ५ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस् →